1. Madax xanuunka Tattoo garbaha wuxuu siinayaa fiirsashada maxaabiista gabdhaha
Gabdhaha, xirashada blees gaaban oo gaaban ayaa tagi doona Tulloo Skat on garbaha si ay u soo bandhigaan eegitaankooda maxaabiista dadweynaha
2. Madax xanuunka Tattoo xagga danbe ka dhig qofka nin xiisa leh
Gabdhuhu waxay jecelyihiin inay dharka Tattoo ku dhejiyaan nadiifinta madow. Tani waxay bixisaa muuqaal cajiib ah
3. Dhabarjirta dharbaaxada garbaha ka dhigaysa gabadh yar
Gabdhaha Brown waxay jecel yihiin Tattoo Skat on garbahooda leh naqshad madow; naqshadeynta tattoo waxay u dhigtaa si fiican oo qurxoon
4. Dharka Tattoo ee gadaashiisa wuxuu ka dhigaa dumarka inay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh
Dumarka waxay jecel yihiin Tattoo Skat on the back with naqshad madow; naqshadeynta tattoo waxay u egtahay inay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh
5. Madax xanuunka Tattoo on bowdada wuxuu siinayaa gabdhaha muuqaal soo jiidasho leh
Gabdhaha, gaar ahaan xirashada gaaban iyo gaaban gaaban oo gaaban ayaa u tegi doona Tattoo Skull on bowdooda sare si ay uga dhigaan kuwo soo jiidasho leh ragga.
6. Madax xanuunka Tartoo garabka dambe waxay keenaysaa muuqaal wanaagsan
Gabdhaha oo jecel naqshadda madow ee naqshadda Tulloo dharka garabka. Naqshadeynta tattoo waxay ku siinaysaa muuqaal wanaagsan.
7. Dharka Tattoo ee garbaha leh naqshad madow ee naqshadeynta gabadhiisu waxay u muuqataa mid soo jiidasho leh
Gabdhaha Brown waxay jecelyihiin Skat Tattoo garabka garabka oo leh naqshad madow; naqshadeynta tattoo waxay u egtahay inay u muuqato muuqaal iyo galmo
8. Madax xanuunka Tattoo garbaha samee gabadh u eg
Dumarka Brown waxay jecel yihiin naqshadeynta naqshadeynta tufaaxa Tulloo garabka midigta. Naqshadeynta tattoo waxay keenaysaa muuqaal fara badan
9. Dharka Tattoo oo leh naqshad midab leh oo khafiif ah ayaa siinaysa fiirsashada maxaabiista gabdhaha
Gabdhaha, xirashada blouses gaaban gacmo gaaban doonaa tagi doonaa Tattoo Skat ka leh naqshadda midab madow dhinaca dhinaca si ay u soo bandhigaan eegitaankooda maxaabiista dadweynaha
10. Dharka Tattoo ee garbaha leh naqshad naqshadda madow waxay keenaysaa muuqaal la jecel yahay
Gabdhaha leh maqaarka madow waxay jecel yihiin naqshadda sawirada madow ee naqshadda Tulloo on garabka; naqshadeynta tattoo waxay u egtahay inay u muuqato mid jinsi iyo muuqaal ah
11. Dhabarjebinta Tattoo leh khad madow iyo casaan, qaabeynta ubaxa samee gabadh muuqata
Gabdhaha jidhka iyo maqaarka jirka ee jilicsan wuxuu jecel yahay Tattoo Skull leh khad madow iyo casaan, naqshad ubax ah; naqshadeynta tattoo waxay ka dhigeysaa inay u muuqdaan kuwo xiisa leh oo qurxoon
12. Madax xanuunka Tattoo ku dheji gacmaha badhkeed haweeneey u egtahay xariifnimo
Haweenka Brown waxay jecel yihiin Skat Tattoo on gacanta sare; naqshadeynta tattoo waxay ka dhigeysaa inay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh iyo galmo
henna tattoogadaal u laaboJoomatari Tattoosgaraacista gacmahalibto libaaxtattoos moonTattoo FeatherTattoo infinityshaatiinka shiidantattoos eaglemuusikada muusikadatattoos cagtasawir gacmeedtattoos sleevetattoos gacantasawirada malaa'igtawaxay jecel yihiin tattoosarrow TattooTattoos Wadnahajimicsiga bisadahatattoos qosol lehtaraagada kubbaddatattoos iskutallaabtacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos qorraxdaku dhaji tattoostattoos qoortafikradaha tattooDhaqdhaqaaqashimbir shimbirnaqshadeynta mehnditattoo indhahatattoos ubaxsawirada gabdhahatattoo maroodigatattoo biyo ahtattoosTilmaamta jaalaha ahtattoo tilmaanlammaanahawaxaa la dhajiyay tattooskoi kalluunkatattoos taajkiitattoos qabaa'ilkasawirrada raggatattoo ah octopustattoos saaxiib saxa ahtattoo dheemanTartoo ubax badanlaabto laabta